Nhau - Ndiro bhodhoro rekare rehupenyu hutsva, Coca-Cola RPET solar amburera "yakagadziriswa" Qingdao North Railway Station
Muna Nyamavhuvhu, 2020, panzvimbo huru yekuyambuka vanofamba netsoka yeQingdao North Railway Station, amburera dzakasarudzika dzakaiswa, izvo zvinhu zvine Qingdao hunhu senge pfapfaidzo, seagull uye dhizaini zvakadhindwa. Akanyanya kurova aive mazwi "ini ndaimbove bhodhoro repurasitiki" uye "Tinotarisira" akadhindwa kumucheto kwemamburera, izvo zvakakwezva kutariswa kwevanofamba netsoka.
Amburera inei nechekuita nemabhodhoro epurasitiki? Zvinoitika kuti idzi amburera dzose dzakagadzirwa nemabhodhoro epurasitiki akadzokororwa. Mushure mekushandisazve, mabhodhoro epurasitiki asina chinhu anogadziriswa kuburikidza nemaitiro akateedzana uye pakupedzisira akarukwa kuita mhando nyowani yegirini yakasvibirira-inoshamwaridzika machira, ekuti RPET machira echinhu, inova pfungwa nyowani mumunda wekugadzirisa zvinhu. Unogona kushandisa mabhodhoro epurasitiki ekare anosvika gumi nemanomwe kugadzira amburera yezuva uye kunyatsoigadzirisazve.
Zvinonzwisisika kuti aya maamburera ezuva anotorwa kubva pane pfungwa yeCoca Cola yekusimudzira kwakasimba - "Hapana tsvina munyika", yakagadzirirwa kutaurira hupenyu hwakazara hwePET, kuitira kuti vanhu vazhinji vanzwisise zviwanikwa zvePET mapurasitiki uye kukosha kwekugadzirisa zvakare.
Kwemakore, CofCO Coca-Cola (Shandong) Co, Ltd. yakazvipira kubatsira kugadzira runako rweguta, budiriro uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, ichitarisa pane hunyanzvi nehupfumi hweveruzhinji, kuvaka pamwe kuvaka guta remaguta reQingdao .
Mucheka wakagadzirwa nefabisi yakadzokororwa nekudzokororazve "Coke bhodhoro" inogona kudzokororwa muPET fiber ine 100% yakadzokororwa zvinhu, izvo zvinogona kudzikisira marara. Parizvino, kunwa kwePET epurasitiki chinwiwa mabhodhoro muChina kwakanyanya kwazvo. Kudzokorora kwemabhodhoro echinwiwa ePET akaraswa hakugone chete kudzora kusvibiswa kwezvakatipoteredza, asiwo kushandura marara kuita hupfumi.
Kune PVC ine chlorine (ndiyo sosi huru yedhioxin uye dioxin inonzi carcinogens) uye ine kusvibiswa kwezvakatipoteredza kwesimbi inorema, plasticizer, nezvimwewo, ichishandisa tekinoroji yazvino, kugadzirwa kweTaiwan hakune PVC, iyo inorema simbi yezvinhu uye inenge isingakwanise kuyerwa, yakatsaurwa kutsiva zvigadzirwa zvePVV, inova chizvarwa chitsva chechengetedzo yezvinhu zvekuchengetedza zvinhu.